पूर्वप्रहरी राईको अनुभव : प्रधानपञ्चले नमस्कार गरेको प्रहरीलाई अहिले कसैले गन्दैन
मान्छे जति साक्षर बन्छ, अपराध उति बेसी
सन्तकुमार राई, पूर्वप्रहरी | २०७६ असार ७ शनिबार | Saturday, June 22, 2019 २०:५६:०० मा प्रकाशित
पाँचथर निवासी ७३ वर्षीय सन्तकुमार राईले नेपाल प्रहरीबाट २०५२ सालमा अवकाश पाए। उनका ५ भाइ छोरामध्ये २ जना काठमाडौं, एक जना भारत र अर्का चाहिँ इलाममा बस्छन्। नजिकै रहेका छोरालाई देखाउँदै उनले भने, 'यो चाहिँ साइँलो।'
राईले हामीसँग आफ्नो विगत सुनाएका छन्। जसमा सेवाका रोचक प्रसंगहरु पनि छन्।
प्रस्तुत छ राईको भनाइ जस्ताको तस्तै:
बन्दुक बोक्ने सानैदेखिको रहर थियो। सबैभन्दा ठूलो मान्छे नै बन्दुक बोक्ने हो जस्तो लाग्थ्यो। २०२४ सालमा काम गर्ने सिलसिलामा पाँचथरबाट भैरहवा पुगियो। त्यसबेला २१ वर्षको थिएँ।
फारम भरियो। २०२४ सालमा आइजिपी रोमबहादुर थापाको पालामा भैरहवाबाट सिपाहीमा भर्ती भएँ। तालिम सकिएपछि पाल्पा दरबन्दी भयो। त्यसबेला पाल्पामा जिल्ला प्रहरी प्रमुख इन्सपेक्टर हुन्थे। अलिहे त डिएसपी/एसपीको जमाना आयो। जिल्ला इन्सपेक्टर मातहत पाल्पाको ठानामा ४ वर्ष काम गरियो।
त्यसबेलाको बर्दी नै छुट्टै। सुरुमा खागी त्यसपछि फुस्रो टेलिकटन आयो। त्यो पनि २०३९ सालबाट बदली भएर अहिलेको निलो बर्दी आएको हो।
पहिला त खागी नै हो। आइरन घोटेको घोट्यै गर्नुपर्ने। ड्रेस बनाउँदा बनाउँदै दोहोलो हुन्थ्यो। सुत्न त पाइँदैन नपाइने नि। दिनभर पिटीपरेड। राति परेपछि कपडा धुयो। दुई जोर नभई हुन्थेन। एक जोर धुएर सुकेपछि आइरन लगायो। त्यहाँदेखिन् अनि अर्को धुएर सुकायो। रातभर आइरन लगाएर भोलिपल्ट बिहान टिलिक्क टल्काउनुपर्ने। खागीमा आइरन घोट्न फेरि यति गाह्रो हुने नि!
बुट टल्किएन भने हाकिम आएर घर्‍याप्प कुल्चिदिन्थ्यो। झनसारो बुट कोरिएर हैरान। बर्दीको एउटा बटम छैन भने सिधै घोप्टो। त्यो फेरि टाँका लाउँदाखेरि बिरङ धागो लाको छ भने कानमा समातेर ५० तालि उठबस। आर्मी पुलिसको शासन त कडा पो हुन्छ त।
हप्तैपिच्छे केश काटेन भने कन्सिरी तानेर हैरान। पिटाइ त मैले खाइनँ। गल्ती गरे पो पिट्छ। गल्ती गर्नु हुँदैन। अनुशासनमा बसेपछि केही पनि गर्दैन। आदेश अनुसार चाहिँ गरेन भने फेरि खाइन्थ्यो। तालिममा त कुटिहाल्छ। त्यो सामान्य हो।
अनुशासनमा बसिएन भने कुटाइभन्दा पनि प्याकडिल र लक बोकाउँदा मान्छेको चेत हुन्छ त। प्याकडिल भनेको १२ वटा इँटा झोलामा बोकाउने, अगाडि २ वटा, ६ वटा पेटमा बोकेर २ घन्टा दौड।
बिनाआदेश कम्पाउन्डबाट निस्केर बाहिर गयो र कसैले कुनै केटीसँग गफगाफ गर्‍यो वा रक्सी खाएर झैझगडा गर्‍यो भने त प्याकडिलमा पर्थ्यो।
लक पर्‍यो भने ठ्याक्कै ५० किलो बोकेर २ घन्टासम्म गुरुबाले भनेजसरी दौडिनुपर्थ्यो। हिँड् भन्थ्यो, हिँड्नै परो। वापस भन्थ्यो, आउनै परो। जा, जानै परो।
रोमबहादुर थापाको पालामा भर्ना भएको। तर उसलाई देख्नै पाइनँ। हेर्न काठमाडौं पुग्नुपर्ने। जिल्लामा ऊ आउँदै नआउने। त्यस्तो आइजी थियो रोमबहादुर।
पल्टनमा रमाइलो भन्ने त के नै हुन्थ्यो र! आफ्नो अनुशासनमा बस्नै परो। कहीँ रमाइलोमा जाने सिपाहीको कुरै भएन। के रमाइलो भन्नु। त्यही आफ्नो कम्पाउन्डभित्र बसो। गफ गरो। साथीसाथी तास खेल्यो। चुरोट खायो। बसो। अनि उता कुन मान्छे पक्राउ गर्न खटाउँछ कि, के गर्न खटाउँछ त्यही अनुसार बाहिर जाने हो। होइन भने बाहिर बिनाआदेशले जान मिल्दैन थियो।
आदेश नाघ्यो भने खुट्टा माथि पारेर हातले टेकेर आधा घन्टा भित्ते। त्यही त हो नि आर्मी र पुलिसको पारा। १० मिनेट हातले जिउ थाम्न सकिँदैन भने आधा घन्टा थाम्नु सानो कुरो हो?
टाउकोले टेक्न पनि नमाइने। थरर्र कामेको छ। त्यहाँ अगाडि यत्रो डन्डा लिएर बसेको हुन्छ गुरुबा। अति नै हात दुख्यो भनेर टाउकाले टेको भने दिइहाल्छ। मैले त यो बेहोरिनँ। तर कोहीकोही साथी थिए नि, उनीहरुको देख्दै म त थररर।
यस्तो अनुशासन थियो प्रहरीमा त्यसबेला। आहिले त खै के हो के? सिपाहीले हाकिमलाई गन्दैन।
भाले त कति खाइयो कति!
कसैको रिपोर्ट पर्छ। गाउँमा गयो। मान्छे पक्रियो। ल्यायो। त्यहाँभन्दा अरु हुँदैन थियो। एक्लै गाउँ जाने कुरा हुँदैन थियो। २/३ जना कति खटाइदिन्छ त्यही अनुसार जाने। केश हेरेर मान्छे खटाउँथ्यो।
कस्तो खालको केश हो? वादविवाद केश हो भने २ जना गए पनि पुग्थ्यो। त्यहाँभन्दा बढी पठाउँदैन थियो। डकैती केश हो भने ४/५ जना। ज्यान केश हो भने ५/७ जना नै जानुपर्‍यो।
गाउँ जाँदा एउटा लठ्ठी लिएर गएपछि गाउँ पुरै थुरुरु हुन्थ्यो। प्रधानपञ्चले नमस्कार गर्थ्यो भनेपछि कुरै सकिगयो नि। प्रधानपञ्चले धरि नमस्कार गरेको प्रहरीलाई अहिले कसैले गन्दैन।
डन्ठा हल्लाउँदै गयो। ओए के छ हाउ भन्यो। नमस्कार गर्दै प्रधानपञ्च, वडाध्यक्ष, सदस्य आउँथे। उनीहरुको घरमा गयो। तपाईंको एरियामा के छ सन्चो बिसन्चो? अपराध घटना केही छ कि भनेर सोधिन्थ्यो। यस्तोयस्तो छ भनेर उनीहरुले सबै भनिहाल्थे। केही छैन भने छैन भन्थे। फर्किंदा पञ्चायत घरको कुराहरु लगेर बुझाउनुपर्थ्यो।
प्रहरीको काम त्यही त हो अपराधी ल्याउने अनुसन्धान गर्ने, सोधपुछ गर्ने। सम्झाइबुझाइ छोड्ने खालको रहेछ भने त्यसैगरी छोड्नुपर्थ्यो। त्यो डकैती र ज्यान सम्बन्धीमा भाटा हानेर हुँदैन। तिनीहरुलाई त जिल्ला पठाउनुपर्थ्यो। जिल्लामा रिपोर्ट गरिन्थ्यो। मुद्दा दायर गरेर जिल्लाबाटै अनुसन्धान हुन्थ्यो।
प्रहरीको हातमा परेपछि कुटाइ नखाने भन्ने त हुँदैन थियो। तैपनि साधारण केश, सम्झाइबुझाइ गर्दा हुनेलाई चाहिँ त्यसै गरेर पठाइन्थ्यो। त्यसरी छोड्नुको अर्थ आयन्दा त्यो नगरेस् भन्ने हो।
गाउँ गएपछि कुखुराका भालेहरु काटिहाल्थे। उस्तै पर्‍यो भने बोकै काट्थ्यो। धेरै जना भए खसी काट्थ्यो। २/३ जना मात्रै गको छ भने भाले काट्थ्यो। काटिहाल्ने-दिइहाल्ने। कति खाइयो खाइयो। हामीले मागेको होइन। वडाध्यक्षले दिन्थ्यो। प्रधानपञ्चले दिन्थ्यो। आबो, गएपछि खान दिनैपरो। भाले पनि खाकै हो। त्यसबेला हरेक घरमा १५/२० वटा भाले हुन्थे। आहिले पो हुँदैन।
अपराधको कुरा गरौं। मेरै घर नजिकै अस्ति आरुबोटैमा ९ जनाको हत्या भयो। मेरा गाउँलाई चाहिँ खेसङखोपा भन्छ। यस्तो पहिला हुँदैन थियो। अपराध त पहिलाको भन्दा त अहिले धेरै। पहिला के हुन्थ्यो र। जति साक्षर मान्छे बन्छ त्यति अपराध बेसी हुन्छ। जति निरक्षरता छ, त्यो निरक्षरताले के गर्न सक्छ र। उसको हिम्मतै हुँदैन। आफ्नो खेतीकिसानी गरेर खानु, आफ्नो बिहान बेलुकाको समस्या हल गर्नुभन्दा उसको त्यो दुनियाँभरको अपराध गर्ने कुरा दिमागमा आउँदैन।
वर्षमा त्यो जमानामा नेपालभर ५ सय जनाले अपराध गर्थे भने आज ५ लाखले अपराध गर्छ। बुझ्नु भयो के? त्यति बढ्यो अपराध।
त्यो बेला जग्गा साँध सम्बन्धमा विवाद हुन्थ्यो। अनि लियादियामा विवाद हुन्थ्यो। अनि लोग्ने स्वास्नीको झगडामा विवाद हुन्थ्यो। अनि जाँड खाएर लडाइँ झगडा या मुख छोड्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। होइन भने अरु कुरा हुन्थेन।
अहिले जस्तो बलात्कार, हत्या, हिसां त अहँ बन्द। बलात्कार, डाँका र ज्यानमाराको कुरा त कताकता। वर्षमा एक पटक पनि हाम्रो कानमा पर्थेन। आहिले त कति हो कति। बलात्कारको घटना त झनसारै पिटिक्कै हुन्थेन। छोरा र छोरी भेट भएर बोलेको पनि लाज हुन्छ भन्थे। बोल्दैन थिए। भेटघाट हुँदाखेरिमा चाहे तरुनी तन्नेरी होस् आफ्नो चाहिँदा कुरा बोल्यो हिँड्यो। लप्पन-छप्पनको कुरै छँदै थिएन। बरु २ जनाको कुरा मिल्यो भने सुटुक्क लानेजाने हुन्थ्यो।
अहिले जस्तो ए... किस खाने अरे, अँगालो मारेर हिँड्ने अरे। जमाना फेरिए। जति मान्छे साक्षर हुँदै जान्छ, त्यति लापरबाही हुँदोरैछ।
छाडेर पनि फेरि जागिर खाइयो
पाल्पाबाट सरुवा भएर आफ्नै जिल्ला पाँचथर आइयो। घर नजिकै रवि ठानामा जागिर थियो। हामी त २४ घन्टे हो। घर नजिकै जागिर भए पनि उही अन्त बसेजस्तै कहिलेकाहीँ यसो घर आउन पाइने। एकडेढ घन्टाको टाइम लिएर आयो। घरमा केही गर्न नपाइने। अनिखेर, नोकरी छोडेर घर व्यवस्था मिलाउनुपरो भनेर २०३९ सालमा जागिर छोडियो।
आफ्नो छोराछोरी मसिनो। घरगृहस्थी सम्हाल्न जागिर छाड्नुपर्‍यो। तर एक जनाले केही गर्न सकिँदो रैनछ।
घर बस्दा पनि दिग्दार भयो। ६ वर्षपछि २०४६ सालमा फेरि गएर भर्ती भएँ। जागिर छाडे पनि त्यतिखेर सरकारले मौका दियो र फेरि खाइयो। त्यति बेला पहरा गण खुलेको थियो। त्यसैमा जागिर जोडियो। छाडेकाले फेरि जागिर खाने आहिले पनि आर्मीको ग्यारिजन त छँदैछ त। आफ्नो आवश्यकताले छोड्ने र फेरि जागिर खाने इच्छा भएमा र आफ्नो रिपोर्ट राम्रो भएमा फेरि लिने भनेको थियो त्यसबेला। रिकर्ड बिग्रेर, बद्मास गरेर छाडेकोले चाहिँ पाउँदैनथे।
त्यतिबेला ६२ रुपैयाँ तलबको बेला भर्ती भएको। खानलाउन पनि धौधौ थियो। तलबले पनि के पुग्थ्यो र महिनाभरि। त्यही हो, खान पिउनका लागि यसो गस्तीसस्ती खटाइदिन्थ्यो। पेनसन हुने बेला १६ सय पुगेको थियो तलब। अहिले लगभग १२ हजार पेनसन आउँछ।
रिज्वाइन भएपछि पहरा गणमा बसियो। त्यसपछि पाकिस्तान एम्बेसीमा ६ महिना। जापान एम्बेसीमा ४ महिना। त्यहाँबाट विमला शाह भन्ने राजा महेन्द्रको बहिनीकोमा ६ महिना बसेँ। कताकता बसियो बसियो। २१ वर्ष ४ महिना १ दिन जागिर खाएर २०५२ सालमा छाडियो। अहिले र पहिलको पुलिसमा फरक भनेको त्यही हो, मैले जागिर छाडेपछि एसएसपी र एआइजीको पद थपियो। अरु उस्तै हो।
पुलिसलाई मान्छेले गन्न छाडे
अहिले आधुनिक जमाना आयो। साक्षर निरक्षर धेरै फरक हुन थाल्यो। प्रहरीलाई गाउँ समाजले मान्ने कुरामा आकाश पाताल फरक छ। त्यही त मैले भनिगएँ नि। प्रहरीको नियम कानुन त एउटा हो। तर काम गराइमा कताकता अन्तर पर्छ।
पहिलाको जस्तो लाटो जमाना छैन। अहिले जामाना बाठो भयो। नोकरी गर्ने पुलिस पनि मान्छे, म पनि मान्छे। मैले गल्ती गरेको छैन किन डराउने? गाउँतिर प्रहरी आयो है भनेपछि पक्रेर लान्छ भन्ने डर थियो त्यसबेला। बिनागल्ती पक्रेर कल्ले पो लान्छ र।
बन्दुक बोक्नै पर्दैन थियो। डन्ठा लिएर गाउँ छिरेपछि गाउँ नै थुरुरु। आहिले त पुलिसलाई कसले गन्ने?
आहिलेको मान्छे त प्रहरीको अफिसमा गफ गर्छ। त्यसबेला कहाँ आउँथ्यो र। आए पनि त्यही प्रधानपञ्च, वडासदस्यहरु आउँथ्यो। अहिले त प्रहरीसँग हातेमालो गरेर हिँडेको हुन्छ। सँगै उठबस भएपछि अनि गन्छ त पुलिसलाई।
प्रहरीको अधिकारमा पनि पहिला र अहिलेमा केही फरक छैन। बरु अहिले बढ्दै गयो। तर प्रहरीलाई मान्छेले गन्न चाहिँ छाड्यो।
(नेपाल प्रहरीका पूर्व सिपाही राईसँग नेपाल लाइभका सहकर्मी नारायण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)